Inqubomgomo Yobumfihlo - Odokotela bamazinyo baseKapa, ​​Isilinganiso Esiphakeme Kakhulu se-Google, Isevisi Yokuzitika
Inqubomgomo Yobumfihlo ye-Optismile
Uma udinga olunye ulwazi oluthe xaxa noma unemibuzo mayelana nobumfihlo inqubomgomo yethu, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi nge-imeyili at https://optismile.co.za/contact-us/.
Ku-https: //optismile.co.za sibheka ubumfihlo babavakashi bethu njengobaluleke kakhulu. Le dokhumenti yenqubomgomo yobumfihlo ichaza ngokuningiliziwe izinhlobo zolwazi lomuntu siqu eziqoqwayo futhi ziqoshwe yi-https: //optismile.co.za nokuthi siyisebenzisa kanjani.
Njengamanye amawebhusayithi amaningi, i-https: //optismile.co.za isebenzisa amafayela we-log. Lawa mafayela amane nje anikeze izivakashi izingosi kusayithi - imvamisa inqubo ejwayelekile yezinkampani zokubamba kanye nengxenye yezibalo zezinsizakalo zokubamba. Imininingwane engaphakathi kwamafayela we-log ifaka amakheli e-internet protocol (IP), uhlobo lwesiphequluli, i-Internet Service Provider (ISP), isitembu sosuku / isikhathi, amakhasi akhomba / aphumayo, futhi mhlawumbe nenombolo yokuchofozwa. Lolu lwazi lusetshenziselwa ukuhlaziywa kwamathrendi, ukuphatha isayithi, ukulandelela ukuhamba komsebenzisi eduze kwesayithi, nokuqoqa imininingwane yabantu. Amakheli e-IP, nolunye ulwazi olunjalo aluxhunyanisiwe kunoma yiluphi ulwazi olukhomba mathupha.
→ I-Google, njengomthengisi ovela eceleni, isebenzisa amakhukhi ukuhambisa izikhangiso ku-https: //optismile.co.za.
→ Ukusetshenziswa kwe-Google kukhukhi le-DART kuyenza ikwazi ukuthumela izikhangiso kubavakashi besiza sethu ngokuya ngokuvakasha kwabo ku-https: //optismile.co.za nakwamanye amasayithi aku-Intanethi.
→ Abasebenzisi bangakhetha ukusebenzisa ikhukhi le-DART ngokuvakashela inqubomgomo yobumfihlo yenethiwekhi yesikhangiso nokuqukethwe ku-URL elandelayo - http://www.google.com/privacy_ads.html
Partners Our Ukukhangisa
Abanye babalingani bethu bezokukhangisa bangasebenzisa amakhukhi namabhikhoni ewebhu kusayithi lethu. Ozakwethu esikhangisa nabo bahlanganisa …….
Ngenkathi ngamunye wabalingani bokukhangisa enenqubomgomo yakhe yobumfihlo yesayithi labo, insiza ebuyekeziwe nexhumene nayo igcinwa lapha: Izinqubomgomo Inqubomgomo.
Ungaxhumana nalolu hlu ukuthola inqubomgomo yobumfihlo yomunye nomunye wabalingani bokukhangisa be-https: //optismile.co.za.
Izinqubomgomo Inqubomgomo Third Party
Kufanele uthintane nezinqubomgomo zobumfihlo eziqondene nalezi zinethiwekhi ezivela eceleni ukuze uthole ulwazi oluningiliziwe ngemikhuba yazo kanye nemiyalo yokuthi ungakhetha kanjani ukwenza okuthile. Inqubomgomo yobumfihlo ye-https: //optismile.co.za ayisebenzi, futhi asikwazi ukulawula imisebenzi yabanye abakhangisi noma amawebhusayithi. Ungathola uhlu olubanzi lwalezi zinqubomgomo zobumfihlo nezixhumanisi zazo lapha: Izixhumanisi Zenqubomgomo Yobumfihlo.
Uma ufisa ukuvimbela amakhukhi, ungase wenze kanjalo ngokusebenzisa okukhethwa yakho isiphequluli ngabanye. Ngolwazi oluthe xaxa mayelana nokuphathwa khukhi iziphequluli web ethize zingatholakala at website iziphequluli 'abafanele. Ayini ama-cookie?
Sikholelwa ukuthi kubalulekile ukuhlinzeka ngokuvikelwa okungeziwe kwezingane online. Sikhuthaza abazali nabanakekeli ukuthi bachithe isikhathi ku-inthanethi nezingane zabo ukubheka, ukubamba iqhaza kanye / noma ukuqapha nokuqondisa imisebenzi yabo eku-inthanethi.
Le nqubomgomo yobumfihlo isebenza kuphela emisebenzini yethu eku-inthanethi futhi isebenza kubavakashi bewebhusayithi yethu futhi maqondana nemininingwane eyabiwe kanye / noma eqoqwe lapho.
Le nqubomgomo ayisebenzi kunoma yiluphi ulwazi oluqoqwe ngokungaxhunyiwe ku-inthanethi noma ngeziteshi ezingeyona le webhusayithi.
Ngokusebenzisa website yethu, wena ngalokhu niyovumelana yemfihlo yethu futhi uvumele WABO.
Le Nqubomgomo Yobumfihlo yagcina ukubuyekezwa ngomhla ka: 28 Septhemba 2020
Kufanele thina update, achibiyele noma wenze noma yiziphi izinguquko yemfihlo yethu, Labo izinguquko luzothunyelwa lapha.